Isakhiwo i-China Plate Pulverizer Model 80 yokwenziwa kunye nefektri | Xinrui
Izinto eziluncedo kunye neempawu
1. Ukondla nokuhambisa: beka iinkuni ebhodini ukuba zophuke;
2. Ukondla i-roller: lawula isantya sokondla kwaye ugcine iphepha ukuba lingatyibiliki kunye nokondla;
3. Isangqa esityiwa ngumoya: Abasiki beWelding basasazwa ngokulinganayo kwisondo ecaleni kwendlela ejikelezayo ukuze kuqinisekiswe ukuba irola yokuchoboza ihlala inamandla afanayo kwicala elijikelezayo;
4. Itempile ityunyuziwe inomsebenzi wokondla nokutyumza ngokuvumelanayo ukuze kuqondwe ukutyunyuzwa okufanayo;
5. Isondo esondayo samkela uck uthwele othwala kunye nendlela yoxinzelelo lwentwasahlobo, enokuziqhelanisa nokutyunyuzwa kobukhulu beplate eyahlukeneyo;
6. I-roller yokutyisa kunye ne-roller etyumkileyo yamkela iinkqubo ezahlukeneyo zamandla, ezilula ukulawula.
1. I-blade ekhethekileyo ikhethelwe i-crusher yesikhonkwane, kwaye ubunzima bekhanda abukho ngaphantsi kwe-HRC55 (ubunzima be-HRC yefayile ngama-51 degrees);
2. Isakhiwo esomeleleyo kunye neplani eqinisiweyo eqinisiweyo yenza ibhokisi yomelele;
3. Ukulawulwa kweqhosha ngokuzenzekelayo, kukhuselekile, kufanelekile, imveliso ephezulu, ingxolo ephantsi;
4. Isityumzi itemplate iseyile angaxhotyiswa ngebhanti yokuhambisa ibhanti.
motor -power 110KW okanye 132KW
Ipharamitha yeemoto eyi-110KW
Ipharamitha yeemoto eziyi-132KW
Egqithileyo Umtya oMandla oMandla oMbane
Okulandelayo: Iplastiki yePulverizer 55kw yeeMoto